Hisokatra rahampitso 1 aprily ny taom-panjonoana MAHALOKY. Nihemotra tamin’ny fanapahan-keviny ny Faritra DIANA izay namoaka fampandrenesana ny 27 marsa 2020, milaza fa ahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fisokafan’ny taom-panjonoana MAHALOKY noho ny Fahamehana ara-pahasalamana mihatra manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, amin’ny fisian’ny valanaretina coronavirus. Nisy ny taratasy fampandrenesana nivoaka tamin’ity talata 31 marsa 2020 milaza ny Fisokafan’ny fanjonoana MAHALOKY. Narahana fepetra izany dia ny hanajana ny « elanelana iray (01) metatra sy tsy mifandray tanana » ho fisorohana ny fiparitahan’ny valanaretina coronavirus. Hazandrano an-dranomasina malaza amin’iny faritra avaratra iny ny Mahaloky. Tsy misy taolana firy sady matsiro izy io. Tonga any ireo mpanangom-bokatra avy any SAVA rehefa fisokafan’ny taom-panjonoana. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 31 mars 2020 13:39
Coronavirus: Esorina amin'ny Hetra aloan'ny orinasa ny fanomezana
Nanamafy ny efa nolazain'ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola, amin'ny alalan'ny Talen'ny fitantanana ny Hetra, fa esorina amin'ny Hetra aloan'ny orinasa, Impôt sur le revenu IR, ny vola nomena hanampiana ny ady amin'ny valanaretina coronavirus, na ireo nomena ny Foibem-pibaikoana CCO, na ireo nomena ny BNGRC, na izay nomena ny Distrika na ny Kaominina. Mila taratasy fanamarinana nandraisana an'izay ny eo anivon'ny fitantanana ny Hetra, ary mila voasoratra ao amin'ny bokim-bolan'ny orinasa nanome.
mardi, 31 mars 2020 07:55
Faritra Menabe: Hazo voarara 200 isa saika hampidirina an-tsokosoko
Mbola manankery ny Naoty lah. 01/19/MEDD/Mi tamin’ny 29 janoary 2019 mahakasika ny fiatonan’ny fanomezan-dalana hitrandraka hazo tsotra sy ny fandrarana ny fitrandrahana hazo sarobidy, araka ny fampahatsiahivana ataon’ny ministeran’ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy. Nisy ny nanararaotra ny fahamehana ara-pahasalamana hitaterana an-tsokosoko hazo voarara. Hazo « Arofy » roanjato isa amin’ny endriny voatsofa no tra-tehaka saika hampidirina tao amin’ny Faritra Menabe tamin'ny herinandro lasa teo, vokatry ny fiaraha-miasa teo amin’ny Zandarimaria, ny tonia mpampanoa làlana ary ny fitaleavam-paritra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy Menabe. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 29 mars 2020 17:45
Faritra DIANA: Nahemotra ho amin’ny fotoana tsy mbola voafaritra ny fisokafan’ny taom-panjonoana MAHALOKY
Namoaka fampandrenesana ny Faritra DIANA, ny 27 marsa 2020, milaza fa ahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fisokafan’ny taom-panjonoana MAHALOKY raha tokony hisokatra amin’ny 1 aprily 2020 izao noho ny Fahamehana ara-pahasalamana mihatra manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, amin’ny fisian’ny valanaretina coronavirus. Sahiran-tsaina manoloana ity fanapahan-kevitra ity ny mpanjono eto Ambanja, izay efa niaritra volana maromaro tsy niandriaka noho ny fikatonan’ny fanjonoana. Hazandrano an-dranomasina malaza amin’iny faritra avaratra iny ny Mahaloky. Tsy misy taolana firy sady matsiro izy io. Tonga any ireo mpanangom-bokatra avy any SAVA rehefa fisokafan’ny taom-panjonoana. (Jereo Sary Tohiny)
Sary: Tom Jorvania‎
Renivohitry ny asa tanana Ambositra, fianakaviana maro no mivelona aminy. Mandalo fotoan-tsarotra ity lalam-pihariana ity ankehitriny noho ny tsy fisian’ny mpizahatany vahiny, izay isany tena mpanjifa voalohany, manoloana ny fepetra nampihatoana ireo sidina iraisam-pirenena ho fampiharana ny fahamehana ara-pahasalamana manolona ity valanaretina coronavirus ity. Iza ary aiza no mba hitarainanay, hoy ireo mpanao asa tanana eto Amoron’i Mania satria manomboka miantraika any am-bilany izy ity ankehitriny. (Jereo Sary Tohiny)
Ankona ny mpiasa tonga handray karama volana febroary 2020 nahita peta-drindrina sy nahazo fampilazana avy amin’ny mpitantana ny SONIA MADA Textile, orinasa mpanao akanjo, eny amin’ny Zone Filatex Ankadimbahoaka, androany zoma 27 marsa 2020, fa halefa « chômage technique » izy ireo manomboka ny 1 aprily 2020. Mpiasa 1000 eo ireo mpiasa voakasik’ity fepetra ity. Raha ny votoatin’ny petadrindrina, dia noho ny fanafoanan’ny mpanjifan’ny orinasa sy ny fisian’ny valanaretina coronavirus tsy voafehy, no nandraisan’ny orinasa fepetra hampiatoana mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fifandraisana ara-barotra rehetra, dia voatery ny orinasa hanakatona ny orinasa sy handefa ny mpiasa « chômage technique » manomboka ny 1 aprily 2020.
Fotoana fiakaran’ny voka-bary izao ety anivon-tany sy faritra maro. Tsy latsaky ny 450 000 taonina fotsim-bary no vokatra hiandrasana ireo mpanangom-bokatra, hoy ny avy eo anivon’ny ministeran’ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Misy ihany ny vary nafarana ka eo amin'ny 22 000 taonina eo izany mba ho fitsinjovana mandra-pahatongan’ireo vary vokatra tamin'ity fotoam-pambolena ity eo amin'ny tsena. Efa tonga ao Toamasina ireo vary nafarana ireo. Miantso ireo mpivarotra ny fitondram-panjakana mba hiara-hisalahy amin’ny famonjen’aina amin’izay tahiry ananany. (Jereo Sary Tohiny)
jeudi, 26 mars 2020 13:19
Fitaterana anabakabaka: 50 ka hatramin’ny 80 000 dolara isam-bolana ny saram-panofana ny fiaramanidina ATR iray ampiasain’ny TSARADIA
Zanaka orinasa eo anivon’ny orinasa Air Madagascar ny TSARADIA. Tamin’ny 2 jolay 2018 no nanomboka nitrandraka ireo sidina anatiny eto Madagasikara. Mahavelon-tena, mampidi-bola ary isany mamelona ny Air Madagascar ny TSARADIA araka ny fanazavan’i Eric Koller, filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Air Madagascar. Mandalo fotoan-tsarotra ny TSARADIA taorian’ny tsy ahafahan’ireo fiaramanidina ampiasaina manohy ireo sidina mankany amin’ny faritra samihafa, ho fampiharana ny fepetra navoakan’ny ACM (Aviation Civile de Madagascar) ny 24 marsa 2020.
Vita tara 100% ny lalana mampifandray ny tanànan’ Ambatondrazaka, renivohitry ny Faritra Alaotra Mangoro amin’ny seranam-piaramanidina Feramanga. Efa mipetraka avokoa ny andrin-jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro manamorona ny lalana sy ao amin'ny seranam-piaramanidina, efa vita koa ny soritra amin'ny lalana. (Jereo Sary Tohiny)